Nooc Degdeg ah oo Nooc ah - Pandawill Technology Co., Ltd.
Pandawill waxay fahmi doontaa in waqtiga uu aad muhiim u yahay markaad raadineyso inaad oggolaato nooc ama aad soosaarto dufcad duuliye ah oo PCB ah si loo oggolaado naqshadeynta. Waxaan sidoo kale ognahay in mashaariicdu ay ku shaqeeyaan waqtigooda ama goor hore, badiyaaana degdega loogu talagalay noocyada noocyadu waa mid dhab ah.
Waaxdeenna CAM Engineering waxay hubin doontaa inaan waqti lagu lumin in naqshadeynta noocaaga ah la soo saaro oo la keeno waqtigeeda. Waxaan soo saari karnaa naqshad fudud oo hal dhinac ah iyo laba-geesood ah PTH 24 saacadood oo mugyo yaryar ah iyo 72-96 saacadood oo loogu talagalay iskudhaf ilaa 8 lakab. Looxyada deg-degga ah, Fadlan horay noogu soo wargeli si aan u hubino in xogta la sii wado daqiiqadda aan helno xogtaada. Waxaanan hubin doonaa inaanu jirin wakhti ku lumay habka wax soo saarka.
Qeybta Nooc deg deg ah Waqtiga Lead Lead (Dufcaddii yar)
2 lakab 2 maalmood 5 maalmood
4 lakab 3 maalmood 6 maalmood
6 lakab 4 maalmood 7 maalmood
8 lakab 5 maalmood 8 maalmood
10 lakab 6 maalmood 10 maalmood
Dhammaan xogta waa la xakameynayaa si ku-meelgaarka xiga ee soo-saarka mugga loo hubiyo in wadarta guud ee u dhexeysa qalabka iyo naqshadeynta loo isticmaalo in lagu oggolaado noocyada iyo tirada wax soo saarka mugga. Wareegyada 'Pandawill Circuits' waa xulasho wanaagsan oo ah shaqadaada noocooda ah waxaanna kaa caawin doonnaa inaan hagaajino naqshadeynta iyo qaabeynta noocyadaada noocyada ah si loo gaaro qiimaha ugu hooseeya ee suurtogalka ah ee tirada wax soosaarkaaga la oggolaaday
La hadal Pandawill waxaanan kaa caawin doonnaa xawaarahaaga suuqa.